Yohimbe n'ụgbụgbọ wepụ - J & S Botanics
Organic Propolis ntụ ntụ
[Latin aha] Corynante Yohimbe [Plant Source] Yohimbe n'ụgbụgbọ anakọtara site na Africa [nkọwa] Yohimbine 8% (HPLC) [Ọdịdị] Red Brown Fine Powder [Particle size] 80 ntupu [Loss na ihicha] 5.0% [Arọ Metal] 10PPM [ wepụ solvents] Ethanol [Nchekwa] Store na jụụ & akọrọ ebe, na-pụọ kpọmkwem ìhè na okpomọkụ. [Ngwugwu] Juru n'ọnụ na akwụkwọ-rụọ na abụọ plastic-akpa n'ime. Net ibu: 25kgs / drum [Gịnị bụ yohimbe] Yohimbe bụ osisi na-etolite Africa, na-asụ asụsụ ala e nwere ...
[Latin aha] Corynante Yohimbe
[Plant Source] Yohimbe n'ụgbụgbọ anakọtara site na Africa
[Nkọwa] Yohimbine 8% (HPLC)
[Ọdịdị] Red Brown Fine ntụ ntụ
[Loss na ihicha] 5.0%
[Arọ Metal] 10PPM
[Wepụ solvents] Ethanol
[Ngwugwu] Juru n'ọnụ na akwụkwọ-rụọ na abụọ plastic-akpa n'ime. Net ibu: 25kgs / drum
[Gịnị bụ yohimbe]
Yohimbe bụ osisi na-etolite Africa, na-asụ asụsụ ala e ji na crude n'ụgbụgbọ na ọcha compound aka agụụ mmekọahụ na arụmọrụ. Yohimbe e ji ọtụtụ narị afọ dị ka onye aphrodisiac. Ọ ọbụna e na-ese siga dị ka a hallucinogen. N'oge, Yohimbe n'ụgbụgbọ wepụ na-akasị ji na-emeso enweghi ike maka ndị ikom na ndị inyom.
Mgbe ingested, Yohimbe na-webatara n'ime ọbara iyi, na Yohimbe si meekwa mmetụta si ya ike na-amụba ọbara na kenwe - na nke a metụtara ma ndị ikom ma women.Aside si ya aphrodisiac mmetụta, na nchọpụta ọhụrụ na-egosikwa na Yohimbe nwere ike antioxidant mmetụta.
Yohimbe Bark wepụ Uru £ º
1.It bụ ihe aphrodisiac maka ma ndị ikom ma ndị inyom
2.Be eji agha enweghi ike
3.It na egosi na abụ a dị ike antioxidant
4.It nwekwara enyere aka igbochi akwara si ịlụ clogged
5.It enyere mmekọahụ arụmọrụ, dịkwuo libido
6.Ithas nwekwara e gosiri nyere aka gbochie obi ọgụ
Previous: Wolfberry wepụ
Natural Sexual nkwalite
Rhodiola Rosea wepụ
Acai beri wepụ
Siberia Ginseng wepụ
Kedu ihe ị maara banyere Berb ...
Gịnị bụ Berberine? Berberine bụ quaternary ammonium nnu si na protoberberine group nke benzylisoquinoline al ...